यसरी हुने छ हामीले चाहेको परिवर्तन
आइतबार, २२ फागुन, २०७३
अहिले मुलुक इतिहासकै अनौठो राजनैतिक धरातलमा उभिएको छ । सरसर्ती नियाल्दा यो विषय गौण देखिए पनि जसरी आज राजनैतिक नेताहरुको हविगत देखिएको छ । त्यसैगरी, आगामी दिनमा यो विषयलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसके राष्ट्र विखण्डनको मारमा परी दुरगामी रुपमा डरलाग्दो असर पर्न सक्छ ।
आज देशलाई समुन्नत बनाउन आर्थिक विकास द्रुत गतिमा बढाउनु पर्ने समयको माग हो । साथै हामीसँग साथमा रहेका दुवै छिमेकी राष्ट्रहरु संसारकै आर्थिकरुपमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । तर, हामी कहाँ छौं ? किन यस्तो स्थिति भोगिरहेका छौं ? र हामीले यसलाई व्यवस्थापन किन गर्न नसकेका ?
नेपाली समाजमा व्यवसायी, मेहनति कर्मचारीहरु, नेताहरु, बुद्धिजिवीहरु, पत्रकारहरु छन् । देशलाई अति नै माया गर्ने देशभक्त, त्यागी र इमान्दार नेता पनि छन्, उनीहरुको बाहुल्यता कति छ ? हाम्रो समर्थन कता छ ?
नेपालको केही दशकको इतिहास पल्टाउने हो भने हाम्रो ब्यबस्था, प्रशासन र सम्पूर्ण प्रणालीहरु कमजोर भईरहेको देखिरहेका छौं । अब हामी सबैले बुझिसक्यौं, देखिसक्यौं, हाम्रो गौरब, राष्ट्रियता, मूल्य र मान्यता । हामीले किन यस्तो रोज्यौं ? किन कमजोर बनाई राख्यौं ? अब यसको उत्तरदायित्व कसले लिने ?
सुनौली सन्धी पछि पनि दक्षिणबाट हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भईरह्यो, विकासमा बाधा पनि भईरह्यो । तर, हामी किन कमजोर भइरह्यौं ? किन यिनको पञ्जाबाट हामीले जोगाउन नसकेको र आर्थिक विकासको कार्यक्रम द्रुत गतिमा अगाडी नबढेको ? हामी किन अल्झेको ?
किन हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरु विदेशमै जन्मे, पालिए, पोषिए ? किन विदेशीकै सामिप्यतामा रहे र अन्त्यमा उनकै नियन्त्रणमा रहे ? बुझेरै पनि विस्तारवाद र साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्ने शक्तिहरु उनकै पोल्टामा परे, हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वोभौमिकतालाई कुल्चेर उनकै मार्गदर्शनमा किन हिँडिरहे ?
एक नेपाली आमाको सपुत जो पढेको छ जानेको छ उच्च नेता पनि भएको छ, देशभक्त र कर्मठ हुनु पर्नेमा कसरी भ्रष्ट र विदेशीको इशारामा चल्ने देशद्रोही हुनसक्छ ? के छ हाम्रो ब्यबस्थामा कमी, हामी कहाँनेर चुक्यौं ?
सत्तालाई लक्ष्य बनाउने गरी राजनिति गर्नु अपराध होईन तर भ्रष्ट र देशद्रोही मार्गलाई माध्यम बनाएर सत्तामा पुग्ने, तिनै मार्गहरु भ्रष्टचारका स्रोत हुन् । तिनै मार्गमा चल्दा एक नेता सफल हुन्छ र सत्तामा पनि पुग्छ । त्यो मार्ग उसको आत्माले जती गलत भने पनि उसले त्यसलाई सहि देख्छ र अङ्गीकार गर्छ । भ्रष्ट मार्ग नचुनेर देशभक्त र इमान्दार हुनेहरुकोे बाहुल्यता र सामर्थता कति छ, हामी जनताको साथ कता छ ?
अब त नेपालको आर्थिक प्रगतिको कुरा पछाडी स¥यो । राजनीतिक एजेण्डा पनि रहेन । देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा नै प्रश्न आयो । राष्ट्रभक्तहरुलाई रातभर निद्रा लागेको छैन । नेपाललाई प्रयोग गर्न विदेशी शक्ति हाम्रो पछाडी लागेको छ र नेपालको प्राकृतिक स्रोत र सामरिक रुपमा कब्जा गर्न अगाडी बढीरहेछ । समथर तराईलाई अलग गरी नेपाललाई अझ कमजोर पार्न चाहान्छ । नेपालले अहिले राजा महेन्द्रको पालामा भएका राष्ट्रियता जोगाउने गतिविधिहरु केही फरक ढंगले संचालन नगरी हामीलाई आजको समस्या समाधान गर्न मुस्कील छ । चीनको सहयोगमा ज्यादा भन्दा ज्यादा नाकाहरु खोल्ने, भौतिक पुर्वाधार, रेलमार्ग, सडकहरु बृद्धी गर्ने, आर्थिक विकासलाई गति दिने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । साथै हामीले भारतलाई अहित हुने कुनै काममा नलागी सावधानिका साथ सानो तर कमजोर राष्ट्रले मनन गर्नु पर्ने मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सधै सम्मान गरी सन्तुलित बिदेश नीति अपरिहार्य छ ।
अहिलेको राजनैतिक ब्यवस्था र संविधानको खोटहरु धेरै छन् । जस्तै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा सांसद किनबेच, सरकार बनाउन सांसद किनबेच, त्यसैले स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष्य निर्वाचित कार्यकारीको ब्यवस्था आवश्यक देखिए पनि देशले धान्न नसक्ने संघीय प्रणाली अर्को मुख्य बाधक हो । तै पनि राजनीतिक निकासमा लाग्दा समय ज्यादा खर्च हुने र अहिलेको अवस्थामा जनताले चाहेको परिवर्तन आउन नसक्ने भएकाले त्यसलाई थाती राखि आर्थिक कार्यक्रममा अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो मनबाट नै गलत र अपराधिक भावना हटाएर गलत र भ्रष्टहरुको साथ छोडे हामीले चाहेको परिवर्तन आउने छ । स्वच्छ समाजको सिर्जना भए, मलजल भए त्यागी, साहसी, बलिदानी महान हस्तिहरु उदाउने छन् र देशले चाहेको परिवर्तन तिनिहरुले गर्नेछन ।
मधेशी, पहाडी, हिमाली, उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान, मजदुर, निम्न आय वर्ग, महिला, जनजातिका प्रशस्त समस्या छन् । यिनको आर्थिक सम्पन्नता र शिक्षामा जोड दिँदै राज्यले यिनलाई प्राथमिकता दिँदै जाने हो भने परिवर्तनको लागि कुनै वाद, चर्का नारा वा संघीय स्वरुप चाहिँदैन । मधेशको भन्दा बढी समस्या त पहाड र हिमालमा पनि छ । त्यसैले, यो त विदेशीको चाल मात्र हो भन्ने सबैले बुझि सकेका छन् ।
त्यसैले, अब हाम्रो एजेण्डा राजनैतिक हुनुपर्दैन । सबै सांसदले आफ्नो स्वार्थ त्यागी देशको स्वार्थको छलफलमा आउनु पर्छ, सबै राष्ट्रभक्तहरु एकै ठाउँमा उभिनु पर्छ । यही अहिलेको समयको माग हो ।
हामीले असल नेता चुनौं, असल सोचौं, असल काम गरौं गलत परिणाम आउंदैन । विस्तारै गलत र भ्रष्टहरु कमजोर हुँदै जान्छन्, विदेशीहरु पनि बिस्तारै हामीलाई कमजोर तुल्याउनबाट भाग्ने छन् । असल काम गर्दै तिब्र बिकासको गतिमा देशलाई लाने हो भने हामीलाई सबैले सहयोग गर्ने छन् न त हामीलाई पारवहनको लागी समुन्द्र चाहिन्छ न त सच्चा र खराब छिमेकी । हामी आफै सक्षम हुँदै जाने हो भने र अनि सबैको भलो सौच्दै जाने हो भने कसैले हामीलाई कमजोर बनाउन सक्दैन ।
हामीलाई जनताले चाहेको जस्तो परिवर्तन चाहिएको छ तर परिवर्तनको शुरुवात कहाँ बाट आ—आफ्नो मन बाट । हाम्रा समाजमा रहेको अन्तरवस्तुलाई केलाउने गलत र अपराधिक कार्यलाई हेर्ने हो भने यिनले देशलाई समस्याग्रस्त बनाएको हुनसक्छ ।
१. राष्ट्रिय भावनालाई ख्याल गरी निस्वार्थ भएर आफ्नो नजिकका नेता वा पार्टीलाई भोट दिनुको साटो असल र इमान्दार नेता वा पार्टीलाई भोट दिऔं ।
२. आफ्नो गाउँ, गुट, साथी वा आफुलाई फाईदा हुने गरी समाजको, संघ संस्थाको, राष्ट्रिय श्रोतको प्रयोग नगरौं ।
३. आफू र आफ्नाको फाईदाका लागी नेता, कर्मचारी, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरुसँग सम्पर्क बढाएर परेको बेलामा आफु र आफ्नाका लागी प्रयोग नगरौं ।
४. भ्रष्टचारी, कमिशनखोर, कलाव्यापारी, विदेशी दलाल, देशद्रोहीको पहिचानगरी तिनलाई समाजबाट बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम देशभरी भारी रुपले सञ्चालन गरौं ।
५. स्वच्छ, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, त्यागी, बलिदानी ब्यक्तिहरुलाई नागरिक अभिनन्दन गरौं । उनैलाई राजनीतिमा आउन र देशलाई डो¥याउन सादर निमन्त्रणा गरौं । जनस्तरमा, गाउँ गाउँमा यस्ता कार्यक्रम गरी जनलहर बढाऔं ।
हाम्रा समाजलाई डोर्याउने प्रतिनिधिहरु नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजिवी, कर्मचारी, पत्रकार, ब्यापारीहरु आफ्नो र आफ्नाको स्वार्थमा यसरी चुर्लुम्म डुबेको छ की यिनैले भित्रभित्रै भ्रष्ट नेता, कमिशनखोर, काला ब्यापारीसँग सम्पर्क बढाएर आफ्नो फाईदामा रमाइरहेका छन् । यो वर्गलाई देश बिग्रेको वा विकासको गति लिन नसकेकोमा त्यति विधि असर परेको छैन । एक प्रभावशाली नेता, व्यापारी वा बुद्धिजीवी एक अर्कासँग मिलेर देशको स्रोतको दुरुपयोग गर्छन् । यी वर्गहरु भेटघाट र सम्पर्क बढाउने काममा सिपालु छन् । मिहेनत गर्ने, कर्मठ भएर लाग्ने भन्दा कसरी देशको स्रोत र साधनमाथि गलत प्रयोग गरी आम्दानी बढाउने धन्दामा रमाएका छन् । यिनले मिहेनत गर्नुभन्दा बसीबसी नेपालमै सुखद जिन्दगी चाहन्छन् । यही वर्गको स्वार्थले देशले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चोट पु¥याएको छ ।
अर्का तर्फ स्वच्छ, देशभक्त, इमान्दार, कर्मठहरु पनि छन् । तिनको समाजमा बाहुल्यता छैन । प्रभावहिन र कमजोर छन् । तर, पनि केही स्वच्छ पत्रकार, समाजसेवी, कलाकार, नेता, प्रशासक र प्रहरीहरुको प्रभाव देखिसकेको छ । यिनै वर्गहरुको जमातलाई बढाउनु पर्ने समाजलाई खाँचो छ । अर्को वर्ग जो पिडित छ —गरीब, निम्न आय वर्ग, महिला, जनजाती, मजदुरहरुले गलत नेता वा समाजका प्रभावशाली व्यक्तिको प्रभावमा वा लोभ लालचमा परी समाजलाई कमजोर बनाएका छन् । यिनले पनि निस्वार्थ भएर राष्ट्रिय हितका लागी स्वच्छ व्यक्तिहरुलाई समाजमा प्रभाव बढाउने र विवेक प्रयोग गरी मत प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागी भारी मात्रामा सामाजिक जनजागरण अभियान संचालन गरिनु पर्दछ ।
अब हामीले समाजमा रहेका निस्वार्थी, स्वच्छ, इमान्दार, देशभक्तलाई इज्जत गरेनौं भने हाम्रो समस्या अझ बढ्छ, देश अझ दिन दिनै नाजुक र कमजोर हुनेछ । अहिले हामीलाई भोट दिन स्वच्छ नेताहरु पाउन मुस्किल परिरहेको छ । समाजले स्वच्छ ब्यक्तिलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र प्रबन्धन गर्दै गएमा अझ त्यस्ता ब्यक्तिहरुको समाजमा उपस्थिति देखिने छ, उनीहरुको प्रभाव बढ्नेछ । यसैबाट देशको राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ । यसैबाट राजनैतिक पार्टी भित्र प्रजातान्त्रिक चरित्र, स्वच्छ र त्यागी भावनाको विकास गर्नेछ ।
भगवान विष्णुले अवतार लिई नयाँ नेता जन्मेलान वा राजा वा सेनाले आएर हाम्रो देश बनाईदेलान भन्नु ब्यर्थ छ । त्यसैले, अब हामीले हाम्रो मनबाट नै गलत र अपराधिक भावना हटाएर गलत र भ्रष्टहरुको साथ छोडे हामीले चाहेको परिवर्तन आउने छ । स्वच्छ समाजको सिर्जना भए, मलजल भए त्यागी, साहसी, बलिदानी महान हस्तिहरु उदाउने छन् र तिनले हामीले चाहेको परिवर्तन गर्नेछन् । अन्त्यमा नेपालीले विश्वका सामु गौरवका साथ बाँच्न पाउनेछौं ।
(लेखक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्)